Reduce your risks of Coronavirus Infection - Crown Education
■ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသွားရောက်သင်ကြားနေသူမြန်မာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာတွင်ကူးစက်ပျံနှံ့မှုနှုန်းမြင့်မားလာသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19မှကာကွယ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို မမေ့လျော့ဘဲ သတိပြုနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလိုပါသည်။
■ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖျားနာသည့်လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာတွေ့ရှိခဲ့ပါက –
✅ ပုံမှန်အတန်းချိန်များကို မဖြစ်မနေတက်ရောက်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ။
✅ ကျောင်းတွင်းရှိ ဆေးခန်း/တာဝန်ကျဆရာဝန်/မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆက်သွယ်ရမည့် Emergency Contactများသို့ အချိန်မီအကြောင်းကြားပါ။
✅ ဖျားနာနေသူနှင့်အနီးကပ်နေထိုင်ခဲ့ဖူးပါက မိမိတို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို ပုံမှန်သတင်းပို့ရန်နှင့် အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရပါက ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Surgical Mask)နှင့် လိုအပ်ပါက တစ်ခါသုံး ရာဘာလက်အိတ်ဝတ်ဆင်ပြီးမှ ကိုင်တွယ်ပါ။
✅ မလိုအပ်ဘဲ အဆောင်/နေအိမ်ပြင်ပသို့ သွားလာခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ။
✅ လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့်မကြာခဏ စင်ကြယ်စွာဆေးကြောရန် စသည့်အချက်များကို အလေးအနက်ထားလိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
■ တစ်ကိုယ်ရည် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအနေဖြင့် –
✅ နေ့စဉ်အချိန်ပေးပြီး မိမိတို့ရဲ့ လက်ကို စင်ကြယ်အောင် မကြာခဏစနစ်တကျ ဆေးကြောပါ၊
✅ နှာချေ ၊ ချောင်းဆိုးကြသည့်အခါမျိုးတွင် နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ကို လုံခြုံအောင် ဖုံးအုပ်ပါ၊၊ တစ်ရှူးအသုံးပြုပါက အမှိုက်ပုံးထဲသို့ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ပါ၊၊ လက်ကို စနစ်တကျ ပြန်လည်ဆေးကြောသန့်စင်ပါ၊၊
✅ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ပါ၊၊ အာဟာရပြည့်ဝစွာ စားသုံးပါ၊၊ ကောင်းစွာအိပ်စက် အနားယူပါ၊၊
✅ လူထူထပ်သည့် နေရများသို့ သွားလာခြင်းမှ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၊၊
✅ အများပြည်သူသုံး နေရာများရှိ ဓါတ်လှေကားခလုတ်များ၊ စက်လှေကား လက်ရမ်းများနှင့် တံခါးလက်ကိုင်များကို မလိုအပ်ဘဲ ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုပါနှင့်၊ ကိုင်တွယ်ပြီးပါက လက်ကို စနစ်တကျ ပြန်ဆေးပါ။
✅ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနများ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များအတိုင်း လေးလေးစားစားလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
■ ဖော်ပြပါ အချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19မှ အတူတူကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်တွေမှာသင်ယူနိုင်တဲ့ Double Major နဲ့ Single Majorအကြောင်း သတိပြုစရာ
Announcement for our New Counseling Services
Mar 20, 2020 Phone Letyar News
[CROWN Education : 09 977 977 200] . ❑ COVID-19သက်ရောက်မှုကြောင့် နိုင်ငံတကာက တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်အများစုမှာအွန်လိုင်းကနေ Face-to-Face သင်ကြားပေးတဲ့ပုံစံတွေအဖြစ် စတင်ပြောင်းလဲလာကြပါပြီ... လောလောဆယ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ပေါ်နေသော COVID-19 ကြောင့်နိုင်ငံတကာတွင်ပညာသင်ရန်ကိစ္စများကို Jun, July လောက်မှသာ အစောဆုံးထားပြန်လည်စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။ . ❑ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း COVID-19ရန်ကကာကွယ်နိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေလူစုလူဝေးပွဲလမ်းသဘင်တွေ၊အခမ်းအနားတွေကို ယာယီရပ်နားဖို့ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သလို...သင်တန်းကျောင်းတွေအနေနဲ့လည်း သင်ကြားမှုတွေကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့ စတင်စီစဉ်လာကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ . ❑ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ CROWN Educationအနေနဲ့လည်း လူ(၂၅)ဦးထက်ပိုတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကို ၂ဝ၂ဝခုနှစ်၊ ဧပြီလကုန်အထိရွှေ့ဆိုင်းထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ . ❑ ...
မြန်မာသားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် မိဘတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုက ဘယ်လောက်ထိအရေးပါသလဲ…
[ဖတ်ရန်ကြာမြင့်ချိန် : ၃ မိနစ်] . ❑ မြန်မာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မိဘတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုအထောက်အပံ့က ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများအရေးပါတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ . ❑ သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက်အထောက်အပံ့လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ မိဘတွေအနေနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးပံ့ပိုးမှုအပိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသာ အရေးကြီးတယ်လို့မထင်စေချင်ပါဘူး။ သားသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာမိဘအများစုဟာဆိုရင် ကျောင်းနေအရွယ်ကတည်းက ကျောင်းပညာရေး၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊အားကစားစတဲ့အရာတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအင်တိုက်အားတိုက် ပံ့ပိုးပေးတတ်ပါတယ်။ . ❑ ဒါကြောင့်မြန်မာအစိုးရကျောင်းကပြီးလာတဲ့ လူငယ်တွေမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအားနည်းတာ၊ ကိုယ်အမှန်တကယ်ဝါသနာပါတာကို မထုတ်ဖော်နိုင်တာ၊ ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှုအားနည်းတာ၊ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာချဖို့ တွန့်ဆုတ်တာ၊ အချိန်ကို ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ပြဿနာရပ်တစ်ခုတွေ့ကြုံလာရင် အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှုအားနည်းတာစတဲ့စတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ...
[ဖတ်ရန် ကြာမြင့်ချိန် : ၂မိနစ်] . ❑ ၂ဝ၂ဝခုနှစ်၊မတ်လ(၁၀)ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (Pandemic)အဖြစ် WHOရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အပြီး သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေမှာလာရောက်ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေကို ပုံမှန်အတန်းချိန်အစား Online Section ဖြင့် စတင်သင်ကြားပို့ချပေးသွားဖို့ တက္ကသိုလ်အများစုတွင်စတင်ပြင်ဆင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ . ❑ ယူအက်စ်မှ Baylor University, University of Vermont, James Madison University, Lipscomb University, Oglethorpe University, Western Washington Universityအစရှိသည့် တက္ကသိုလ်များနှင့် ...